शान्ति सद्भाव र विकास मेरो एजेण्डा ः शेख वकिल
अन्तरवार्ता 35 पटक पढिएको
गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि तपाईको नाम नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार हुन लाग्दाँ कस्तो लागि रहेको छ?
— म राजनीतिमा जनताको सेवा गर्नका लागि आएको छु । लागातार २०।२२ वर्ष देखि सेवा गरिरहेको छु । शान्ति सद्भाव र विकास मेरो एजेण्डा हो । म जनताको हरेक सुख दुःखमा साथ छु । अरुको गाउँको तुलनामा मेरो गाउँको हरेक किसिमले विकास भएको छ । मेरो परोहा गाउँ पालिका विरेन्द्र राजमार्ग देखि भारतको सिमाना संग जोडिएकोृ ६ वटा गाविस रहेका छन् । यसमा यति विकास होस की रौतहटमा मात्र होइन नेपालमा उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत होस ।
परोहा गाउँपालिकामा के—के विकास गर्नुपर्ने जरुरी तपाईले देख्नु भएको छ ?
— जनु किसिमको विकास लौकाहामा विकास भएको छ । यस्तो विकास परोहा गाउँपालिकाको सबै गाउँमा जरुरी छ । मेरो बुवा सात पटकट लौकाहा गाविसको अध्यष हुनु भयो । वहाँले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै पनि चुनाव हार्नु भएन । वहाँकै प्रेरणाले म पनि राजनीतिमा लागेको छु । मेरो उद्देश्य धेरै पैसा कमाएर ऐस, मौज गर्ने होइन । मैलु दुःख, सुख काटेर जनताको हरेक सुख, दुःखमा साथ दिएको छु । बजेट नरहेको बेलामा आफ्नो स्तरबाट सानो तिनो काम हामीले गरीरहेका हुन्छौं । गाउँमा धार्मिक सद्भाव बनाएर राख्ने गर्दछु ।
म मुस्लिम इस्लाम धर्म मान्दछु । तर हिन्दु धर्मको सबै को सबै चाडपर्वलाई सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्दछु । अरु गाउामा जातिय विवाद भएपनि मेरो गाउँमा हुँदैन । मेरो बुवाको पाला देखि लौकाहामा जनमाष्ठमीको अवसरमा धुमधामका साथ मेला लाग्दछ । मेरो अग्राणी भूमिका हुन्छ ।
परोहा गाउँपालिकामा अरु दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेसको स्थिति कस्तो रहन्छ ?
— परोहा गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस धेरै मजबुत छ । त्यसकारणले धेरै जसो पार्टी उम्मेदवार घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । सब तालमेलको चक्करमा लागेका छन् । मेरो गाउँ पालिकामा भवन लगायतका पूर्वधार तयार भएका छन् ।
जिगडवा, लौकाहा बीच लालवकैया नदीमा हाम्रो पहलमा ३३ करोडको लागतमा पक्की पुल निर्माण भईरहेका छन् । सोही बाटो लौकाहा, बसन्तपट्टी, नरकटीया हुँदै बोर्डर सम्म जान्छ ।
अन्तमा के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
— गाउँपालिकाको सबै जनतालाई क्रान्तिद्धार दैनिक पत्रिका मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु की एक पटक मलाई मौका दिनुहोस । मेरो विगतको काम र चत्रिर छ । त्यसलाई आम जनसमुदायले पत्ता लगाई मेरो पक्षमा निर्णय लिन अनुरोध गर्दछु । आम जनसमुदायलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर मतदान गर्न अनुरोध गर्दछु । मलाई विश्वास छ । परोहा गाउँपालिकाको जनता मलाई धेरै भन्दा धेरै मत दिएर निर्वाचित गराउँदछ । म विजयी हुन्छु । मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
847941	Times Visited.